နည်းပညာနှင့်သီတင်းရပ်ဝန်း: Windows အသုံးဝင် shortcut keys များ
Windows အသုံးဝင် shortcut keys များ
Start + R - Start menu မှာရှိတဲ့ “Run” box ကိုဖွင့်ပေးပါတယ်။
Start + Ctrl + F - search box ကိုဖွင့်ပေးပါတယ်။ တကယ်လို့ computer ဟာ network ချိတ်ဆက် ထားရင် computer dialog box ကိုဖွင့်ပေးပါတယ်။
Alt + F4 - ဖွင့်ထားတဲ့ Program ကနေထွက်ခွာစေပါတယ်။ အလုပ်လုပ်လျက်သားဖြစ်နေရင် သာမာန်ပုံစံအတိုင်း “save” လုပ်မလားလို့ မေးပါလိမ့်မယ်။
Shift + F10 - ရွေးချယ်ထားတဲ့ ဖိုင်တစ်ခုအတွက် “shortcut” ဖိုင်ငယ်ကလေးတစ်ခုပြုလုပ်ပေးပါတယ်။
Alt + down arrow - drop down list box ကျလာစေပါတယ်။ Software တစ်ခုအတွင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ တစ်ခြား
နေရာ တစ်ခုမှာပဲဖြစ်ဖြစ် features တိုင်း၌ လုပ်ဆောင်စွမ်း box ငယ်လေးများကိုယ်စီ ရှိကြသည်။
Alt + Tab - ဖွင့်ထားတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တိုင်းအား တစ်ခုနှင့်တစ်ခု အကြားကူးပြောင်းစေနိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ Alt Key ကိုဖိထားပြီး Tab Key ကိုလွှတ်လိုက်မယ်ဆိုရင် လုပ်ဆောင်ဆဲ လုပ်ငန်းစဉ်မှန်သမျှကို အလွယ်တကူကြည့်ရှုနိုင်ပြီး လုပ်ငန်းပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။
Shift + ? - တကယ်လို့ shift key ကို ဖိနှိပ်ထားပြီး CD-ROM ဒါမှမဟုတ် DVD တစ်ချပ်ကို ထည့်သွင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် အဲဒီ CD/DVD ရဲ့ “Auto Run” box တက်လာပါမယ်။ CD မှာ virus ပါဝင်မှု ရှိ၊ မရှိ ကို စစ်ဆေးလိုတဲ့ အခါမှာ အသုံးဝင်ပါတယ်။
Alt + underlined letter - Software တစ်ခုအတွင်းမှာ သတိထားကြည့်မယ်ဆိုရင် options bar ရဲ့ feature တွေမှာ မျဉ်းတားထားတဲ့ စာသားလေးတွေမျိုးစုံကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ Alt ကိုဖိနှိပ်ထားပြီး အခုန စာသားလေးကို နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ အဲဒီ “feature” ရဲ့ “drop down box” (ပါဝင်တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ) ပွင့်လာပါမည်။
ဖိုင်တစ်ခု မိတ္တူပွားရန် - Ctrl key ကိုနှိပ်ထားပြီး အဲဒီဖိုင်ကို မတူညီတဲ့ တခြားနေရာကို ရွေ့ပေးပါ။
အပေါင်းလက္ခဏာ သေးသေးလေး ပေါ်လာပြီ မိတ္တူပွားပေးပါလိမ့်မည်။
Shortcut တစ်ခုဖန်တီးရန် - Ctrl နဲ့ Shift key တွေကို ဖိနှိပ်ထားရင်း ဖန်တီးချင်တဲ့ folder ဒါမှမဟုတ် အရာဝတ္ထုကို ဖန်တီးလိုတဲ့နေရာဆီကို drag ဆွဲယူပါ။
F4 - object ကို select ပေးထားရင်းနဲ့ F4 ကိုနှိပ်ရင် address bar ကို ဖွင့်ပေးပါတယ်။
General folders/ shortcut control
F5 (Refresh) - လုပ်ဆောင်နေတဲ့ အလုပ်တွေကို ပြန်လည် လန်းဆန်းစေပါတယ်။
F6 - Window Explorer အတွင်း ဟိုဘက်၊ ဒီဘက် cursor ကိုရွေ့နိုင်ပါတယ်။
Ctrl + A - အရာဝတ္ထုများအားလုံးကို select လုပ်ပေးပါတယ်။ တကယ်လို့ desktop ပေါ်မှာ item တစ်ခုကို click နှိပ်ပြီး “Ctrl + A” command သုံးလိုက်ရင် ကျန်တဲ့ item တွေကိုပါရွေး ချယ်ပြီးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မည်။
Shift + Click + close button- ဖွင့်ထားတဲ့ Folder တွေမှန်သမျှ အားလုံးကိုပိတ်ပေးပါတယ်။
Window explorer အတွင်း
* (Keypad) - ရှိရှိသမျှ root folder တွေအားလုံးကို အကုန်ဖွင့်ပေးပါတယ်။
+ (Keypad) - root folder တစ်ခုအတွင်းရှိ ရှိရှိသမျှ file တွေအားလုံးကို ဖွင့်ပေးပါတယ်။
- (Keypad) - root folder တစ်ခုအတွင်းရှိ ဖွင့်ထားခဲ့တဲ့ file တွေကိုပိတ်ပေးပါတယ်။
Right Arrow - “+” နဲ့ အလုပ်လုပ် ပုံချင်းတူပါတယ်။
Left Arrow - “-” နဲ့ အလုပ်လုပ် ပုံချင်းတူပါတယ်။
Ctrl + Tab - Mouse မသုံးဘဲ keyboard နဲ့ခုန်ပြန်ကျော်လွှားသွားနိုင်ပါတယ်။ (Ctrl + Tab + Shift)
*Mouse အသုံးမပြုပါက Mouse properties တချို့ ကို disable လုပ်ထားလျှင် ပိုကောင်း၏၊*
Shift ကိုငါးကြိမ်နှိပ်တဲ့အခါမှာ- Control Panel ထဲမှာရှိတဲ့ Accessibility options ကို select ပေးပါတယ်။ Shift ကို ငါးကြိမ်ဆက်တိုက်နှိပ်ရင် PC ထဲကနေ “ကွိ” ဆိုတဲ့ အသံကလေး ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ ပြီးရင်တော့ Shift key ကို save မလုပ်ချင်ရင် cancel လုပ်ပါ။
Right Shift ကိုရှစ်စက္ကန့်အကြာ- ညာဘက် Shift Key ကို ရှစ်စက္ကန့်ကြာအောင် နှိပ်ထားရင်လည်း filter key box လေးပေါ်လာပါလိမ့်မည်။
Number Lock key ကိုငါးစက္ကန့်- Number Lock key ကိုငါးစက္ကန့်ကြာအောင်ဖိနှိပ်ထားတဲ့အခါမှာလည်း ထိုနည်းလည်း ကောင်းပါပဲ၊ အလုပ်လုပ် ပုံချင်းသာကွဲပြားသွားမှာပါ။
Left Alt + Left Shift + Number lock- PCထဲက “ကွိ” အသံလေးအတွက် function ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကအားဖြင့် တော့ mouse key ကို အပိတ်၊ အဖွင့်လုပ်စေချင်တာပါ။
Left Alt + Left Shift + print Screen- မြင့်မားတဲ့ ပုံရိပ်တွေကို ရယူလိုတဲ့အခါမှာ အဆိုပါ keyboard တွဲကို တွဲဘက်နှိပ်
Start (Windows logo) + D - Windows တွေကို task bar ပေါ်ကို ခဏတင်ပေးပါတယ်။
Ctrl + Start + F - Search box ကိုဖွင့်ပေးပါတယ်။ ခွေးလေးကိုမလိုချင်ရင်ပယ်ဖျက်ထားလို့ရပါ တယ်။
Ctrl + Start + Tab - Address bar ဆီကို ချက်ချင်း cursor ချပေးပါတယ်။
Start + Tab - Taskbar ပေါ်မှာ စုပြုံဖွင့်ထားတဲ့ folder တွေဆီကို တစ်ခုကနေ တစ်ခု ကူးပြောင်းနိုင်ပါတယ်။
Start + Pause (Break) - System Properties ကိုချက်ချင်းဖွင့်ပေးပါတယ်။
Application key - File or folder ရဲ့ Properties ကိုဖွင့်ပေးပါတယ်။
Document box Command
Tab - dialog box ထဲမှာဆိုရင် နောက်တစ်ခုကို သွားဖို့အဆင်သင့် ဖြစ်နေပါတယ်။
Shift + Tab - လာခဲ့တဲ့ Control ဆီကိုပြန်သွားပေးပါတယ်။
Spacebar - ရွေးချယ်ပြီးလုပ်ပါတယ်။ (e.g. button တစ်ခုကို ရွေးချယ်ထားတယ်။ အဲဒီ button ကို click နှိပ်ရုံပဲ။ ဥပမာ check box တစ်ခုကို ရွေးချယ်ထားမယ်ဆိုရင် space bar တစ်ချက်ပုတ်ရုံပဲ။ ဥပမာ နှစ်ခုပြပေးထားပါတယ်။ တစ်ခုကို ရွေးချယ်ရမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ Enter နဲ့တူပါတယ်။
Esc - အရာအားလုံးရဲ့ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းဟာ “cancel” ရဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံနဲ့တူတယ်။
Alt + Underlined Letter - Alt ကိုဖိထားပြီး underline သားထားတဲ့ အက္ခရာကို နှိပ်မယ်ဆိုရင် အဲဒီ command အတွက် Shortcut တစ်ခုပါပဲ။
Enter - Object တစ်ခုကို select ပေးပြီး OK Button နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဆင်တူတယ်။
တချို့ဟာတွေ သိပြီးသားဖြစ်မှာပါ ။
Posted by ကိုရုပ်ဆိုး at 9:17 PM0comments
window Cmd အနည်းငယ်ပါ......
Crazy Windows Xp Shortcut , Run , CMD
Window XP shot Cut
findfast.cpl - FindFast control Fonts Folder control fonts
main.cpl - keyboardKeyboard Properties control
mmsys.cpl - Multimedia / sound Properties control
password.cpl - Password Properties control Printers Foldercontrol printers
ANSI.SYS Defines functions that change display graphics,control cursor movement, and reassign keys.
APPEND Causes MS-DOS to look in other directories wheneditingafile or runningacommand.
ARP Displays, adds, and removes arp information fromnetwork devices.
ATMADM Lists connections and addresses seen by Windows
ATM call manager.
BATCH Recovery console command that executesaseriesof commands inafile.
BOOTCFG Recovery console command that allowsauser to view,modify, and rebuild the boot.ini
CHCP Supplement the International keyboard and characterset information.
COLOR Easily change the foreground and background colorof the MS-DOS window.
DEBUG Debug utility to create assembly programs tomodify hardware settings.
DISABLE Recovery console command that disables Windowssystem services or drivers.
DISKCOPY Copy the contents of one disk and place them onanother disk.
DOSKEY Command to view and execute commands that havebeen run in the past.
ENABLE Recovery console command to enableadisableservice or driver.
ENDLOCAL Stops the localization of the environment changes enabledby the setlocal command.
EXPAND ExpandaM*cros*ft Windows file back to it\_'soriginal format.
FASTHELP Displaysalisting of MS-DOS commands andinformation about them.
FTYPE Displays or modifies file types used in fileextension associations.
IPCONFIG Network command to view network adapter settingsand assigned values.
LISTSVC Recovery console command that displays theservices and drivers.
LOGON Recovery console command to list installations andenable administrator login.
MSAV Early M*cros*ft Virus scanner.MSD Diagnostics utility.
NBTSTAT Displays protocol statistics and current
TCP/IP connections using NBT
PING Test / send information to another network computeror network device.
POPD Changes to the directory or network path storedby the pushd command.
PUSHD Storesadirectory or network path in memoryso it can be returned to at any time.
SETLOCAL Enables local environments to be changed withoutaffecting anything else.
SHIFT Changes the position of replaceable parametersinabatch program.
SMARTDRV Createadisk cache in conventional memory orextended memory.
SUBST Substituteafolder on your computer foranother drive letter.
VERIFY Enables or disables the feature to determine if fileshave been written properly.
XCOPY Copy multiple files, directories, and/or drives fromone location to another.
TRUENAME When placed beforeafile, will display the whole directoryin which it exists
TASKKILL It allows you to kill those unneeded orlocked up applications
ALT+- (ALT+hyphen) Displays the Multiple Document Interface
(MDI) child window\_'s System menu
BACKSPACE View the folder one level up in My Computer or
CTRL+RIGHT ARROW Move the insertion point to the beginning of
CTRL+LEFT ARROW Move the insertion point to the beginning of
CTRL+DOWN ARROW Move the insertion point to the beginning of
CTRL+UP ARROW Move the insertion point to the beginning of
SHIFT+DELETE Delete selected item permanently
F4 Display the Address bar list in My Computer or
F6 Cycle through screen elements inawindow or on
SHIFT when you insertaCD Prevent the CD from
CTRL+(+) - Automatically resize the columns
CTRL+ENTER - Adds the http://www. (url) .co
Posted by Hajee Than Hla Oo at 2:16 AM